Iron iron: ukuthola, isicelo, izindawo
Ukuvikela izakhi ezithile zezakhi zokwakha kusuka ekubhubhiseni, izinto ezikhethekile zisetshenziswa. Ngenxa yezindawo zabo, izimpahla zokuhlobisa nokuhlanzeka nezokuhlanzeka zakhiwo zithuthuka. I-iron oxide ingenye yalezi zinhlanganisela. Sebenzisa lesi sici nakwezinye izimo eziningi.
Yisiphi i-Iron Ox eyenziwe
I-Powder, etholakala ngokugaya ishisa ngesimo se- iron ore, imelana nokushisa, isimo sezulu nemiphumela emincane. Ubunzima obomvu obomvu buyinhloko ye- iron oxide.
Ukubala ubuningi be-limonite ore medium-air medium, kufakwa ekuhambeni okufunayo. Khona-ke i-powder, echotshoziwe esiswini somshini okhethekile obizwa ngokuthi "ukushona", iphakanyiswe esikhwameni noma ezitsheni zensimbi zokuthumela kumabhizinisi ezimboni. Ukubamba iqhaza emaketangeni okukhiqiza njengento eyinhloko noma eyengeziwe, uhlelo lokusebenza lwe-marble lensimbi lunemiphumela ehlukahlukene.
Izinto ezingaguquki ezingenakulungiswa
Ngenxa yekhwalithi yayo eqinisekisiwe, i-pigment eyenziwa nge-ore isetshenziswa ngokuphumelelayo ezimbonini ezihlukahlukene:
Ngopende kanye ne-varnish ekwakhiweni kokubumba nokuxuba imibala;
Ekukhiqizweni kwama-flame retardants kanye nama-formulations;
Lapho ukugcoba ingilazi nezingxenye zensimbi njengento ebanzi ehlakazekile.
Ngaphezu kwalokho, lokhu kuhlanganiswa kuhlanganisa ezinye izingxenye zezimoto ezintsha, njengoba lesi senzo sivikela ngokugcwele insimbi ekugqibeni.
Ukudweba okunjalo kokwakha
I-stable kakhulu yama-agent anticorrosive liquid yi-iron oxide. Izici zobuchwepheshe zivumela ukusebenzisa le peyinti yokucubungula amabhodlela emoto kanye namapayipi. Amapulangwe ensimbi kanye nezindwangu zamanzi, ukushisa ama-radiators nezinsimbi zensimbi ziphathwa ngaleli thuluzi. Ngaphezu kwalokho, i-iron oxide isetshenziselwa ukumboza izingxenye zokhuni zesakhiwo, kungakhathaliseki indawo ngaphakathi noma ngaphandle. Ukudweba phansi, lokhu kwakhiwa akunconywa.
Umdwebo wenziwa ngokusungula i-powder yensimbi ku-naphthalene (amafutha) ama-varnishes. Ukuze kugcinwe isimo sokumiswa, izithasiselo ze-thixotropic ne-desiccant zengezwe engxenyeni. Ngemuva kokuxubaniswa ngokucophelela nokupakisha, upende lokushisa olusenesikhathi sezulu lusetshenziselwa i-iron oxide (umbala obomvu).
I-pigment engokwemvelo noma yemvelo: okungcono
Ama- powders omile, noma ama-pigment, abizwa ngokuthi angenasoluble emakhemikhali amakhemikhali ama-powders ahlukene ahlukene ahlukahlukene. I-powder engavamile, engxenyeni yengubo yokwakha, inikeza ukugqoka lokhu noma lowo mthunzi. Ngaphezu kwalokho, ukungezwa kwe-pigment pigment, njenge-wax ye-iron, akuthuthukisi nje kuphela ukuphazamisa, kodwa futhi nezakhiwo zokuzivikela ezakhiwe.
Embonini, izinhlobo ezimbili zama-dyes zisetshenzisiwe: ezifakelwayo nemvelo. Izigcwalisi zamasheya zihlukaniswa ngokugqama, ukuhlukahluka nokugcwala kwephalethi yombala. Idayi yemvelo ikhishwa emathunzini omhlaba. Zihlukaniswa ngokuncishiswa, ukungabi nengozi nokuphikiswa kangcono emathonyeni angaphandle omkhathi. Insimbi ye-Iron ibhekisela eqenjini lesibili. Izinto ezilandelayo nazo zingu-pigment mineral zemvelo:
I-oki elimhlophe nelophu elimhlophe;
U-brown umber ne-yellow sienna omnyama;
I-vermilion ebomvu ne-pyrolusitis emnyama-emnyama;
Indlela yokusebenzisa upende
Ngaphambi kokudweba, lungiselela ngokucophelela indawo. Ukukhishwa kwesibisi nokugcoba, uthuli nesilinganiso. Umdwebo kufanele uhlangane kahle. Uma kunesidingo, ukubunjwa kuhlanjululwe nge-solvent, turpentine noma umoya omhlophe ukudala izinga elifunayo labantu.
I-ox oxide isetshenziselwa endaweni elungiselelwe nge-brush evamile. Isikhathi sokumisa sokugqoka sincike ezimweni zokushisa futhi singahlala emahoreni angu-20 kuya kwangu-24. Ukuthola ukuvikelwa okungcono kumathonya angaphandle, ukwakheka kombala kusetshenziselwa izendlalelo eziningana, ngaphambi kokulinda ukomiswa okuphelele kwalowo owedlule. Uma ukusheshisa nokunganaki ukubusa kwalolu buchwepheshe, ukugqoka ngeke kuhlangabezane ngokugcwele nezidingo ezidingekayo. Ifilimu yepende izoba yinkimbinkimbi futhi yonakaliswe kalula.
Izindlela zokuphepha emsebenzini
Umsebenzi wokudweba ozimele, kufanele ulandele imithetho elula yokuphepha. Kulesi simo, zifaka izinto ezilandelayo:
Igumbi, elisebenzisa i-iron oxide, kufanele libe nomoya wokuphuza umoya phakathi kokubili komdwebo nangemva kwalo.
Ukubhema nokusetshenziswa kwemithombo evulekile yomlilo eduze kwento yokusebenza akuvunyelwe.
Izandla kufanele zibe yiglavu noma igilafu elahlayo. Ungasebenzisa ama-biocke ekhethekile okuzivikela.
Amaphoyinti azovikela amehlo akho ekungeneni ngengozi kwezinto ezincane zokupenda ku-cornea.
Uma kwenzeka uxhumane nesikhumba, isikhumba esingavinjelwe kufanele sisuswe ngendwangu yendwangu ehambelana nemimoya yamaminerali noma noma yimaphi amafutha emifino. Bese ugeza ngamanzi afudumele nge-degreaser yasekhaya noma insipho.
Ngemuva kokuphela komsebenzi, i-wax esele ye-iron isala kude nokushisa imishini kanye nemithombo yomlilo. Ibhange kufanele livalwe ngokuqinile ukuze kuvimbele ukuqina nokomiswa kokubunjwa. Ungalondolozi upende elangeni, emakhazeni nasemvula.
Ukudweba isicabha: ukwenza indlu ihle
I-Haro Laminate: Imininingwane kanye Nezithombe
Umshini wokushisa amanzi wokuphuza umoya. Isimiso sokusebenza kwe-air umoya omusha nge-heat heater
Ipeyinti yezindonga ekhishini yahluleka: amanzi asekelwe, i-acrylic, i-latex. Yikuphi okumele ukhethe?
Yelulela ukushayela: izinzuzo kanye nokuqapha, ukubuyekezwa, ukuhlanganiswa kanye nezindleko, ubungane bomvelo
I-Amoniya i-antipode ne-analog ... yamanzi?
Umsebenzi okhanda amanye amathuba amaprotheni: izibonelo. Imisebenzi esemqoka amaprotheni
Kuyini graphology? Graphology: Definition, Meaning
Smartphone "Lenovo A606": Uhlolojikelele, incazelo, ukubuyekezwa